March 2018 – Wargeyska Waxgarad
Wadaad waa Nin!
March 6, 2018	Aragti 0
Adeegsiga ereyga “wadaad” dhibaatooyin baa ku hoos jira. Waxa uu noqday dallad la hoos hadhsado, dadka lagu hodo, eeddana lagaga gabbado. Dadku waa wada Muslin mana aha in magac gaar ah aynu siinno ku dhaqankii diinta ee qof walba looga baahnaa. In ninku gadhka la baxaa waa wax diinteenna ka …
March 1, 2018	Sheeko Gaaban 0
Iyadoo lala hadlin bay dadka ka hadlisaa, qosol aanad u jeedin bay kaa keenaysaa. Siddeed sano ayaa u dheer tobanka. Wejiga sida dhuuban u samaysan iyo sanqaroorka dhex qotama bay muraayadda hor haysaa. Waa muraayad dhererkeeda ka hoosaysa. Indho kuul bay si jiifa u marinaysaa indho leh uma baahnin. Gacanteeda …